Soosaarayaasha Heerkulbeegga Caafimaadka ee Shiinaha iyo alaab-qeybiyeyaal - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Qalabka Isbitaalka > Heerkulbeegga caafimaadka
Heerkulbeegga caafimaadka, waxa loo sii maraa infrared-ka si loo wado cabbirka heerkulka, waxa loo qaybin karaa nooca xidhiidhka iyo nooca labaad ee aan xidhiidhka ahayn. Heerkulbeegga Infrared ee cabbiraya heerkulka, xoogaa ammaan ah, sax ah, oo ku habboon waayeelka, carruurta, isbitaallada iyo qoysaska.
Heerkulbeegga caafimaadku waxa uu diiradda saaraa shucaaca kulaylka infrared ee jidhka qalabka wax baadha, kaas oo u beddela tamarta shucaaca ah calaamad koronto oo lagu cabbiri karo darajo Celsius (ama Fahrenheit) ka dib marka la magdhabo heerkulka deegaanka.
Heerkulbeegga caafimaadku wuxuu leeyahay faa'iidooyinka ururinta heerkulka ku habboon, fudud, degdeg ah oo sax ah, kaas oo aad ugu habboon bukaannada qaba cudurrada daran iyo kuwa daran, waayeelka, dhallaanka iyo wixii la mid ah. Khasaaruhu waa sahlan tahay in lagu saameeyo heerkulka jawiga, iyo kiiskan qaladku waa weyn yahay.
Heerkulbeegga foodda infrared ee caafimaadka
Waxaan bixinaa Heerkulbeeg Infrared Infrared Medical kaas oo leh hal badhan oo hawlgal ah, 32*2 kooxaha xusuusta ee labada nooc, 3 midabo iftiinka dambe. Waxay bixisaa akhrin degdeg ah oo heer sare ah oo sax ah ee heerkulka jidhka qofka. Waxa ay kulaylka la cabbiray u beddeshaa akhriska heerkulka ka muuqda LCD-ga.
Dheejada heerkulka foodda
Waxaan bixinaa koollada heerkulka foodda taasoo siinaya akhrin degdeg ah oo aad u sax ah heerkulka jidhka qofka. Waxa ay kulaylka la cabbiray u beddeshaa akhriska heerkulka ka muuqda LCD-ga. Marka si habboon loo isticmaalo, waxay si dhakhso ah u qiimeyn doontaa heerkulkaaga si sax ah.
Qoryaha heerkulka Dhegaha
Waxaan bixinaa Qoryaha Heerkulka Dhegaha kaas oo si gaar ah loogu talagalay in si badbaado leh loogu isticmaalo xudunta dhegta. Waa qalab awood u leh in lagu cabbiro heerkulka jidhka dadka iyadoo lagu ogaanayo xoogga iftiinka infrared ee ka soo baxa kanaalka dhegta ee bini'aadamka. Waxa ay kulaylka la cabbiray u beddeshaa akhriska heerkulka ka muuqda LCD-ga. Marka si habboon loo isticmaalo, waxay si dhakhso ah u qiimeyn doontaa heerkulkaaga si sax ah.
Heerkulbeegga Mujuruca Ilmaha
Waxaan bixinaa heerkulbeegga mujuruca ilmaha kaas oo ah shay ugu fiican dhallaanka, carruurta iyo carruurta. Cutubka alaabtani waa Celsius (°C). Waa heerkulbeegga dhallaanka dhijitaalka ah ee caagga ah. Wax dhib ah uma laha deegaanka iyo sidoo kale ilmaha sababtoo ah meerkuri lama isticmaalo.
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Heerkulbeegga caafimaadka oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Heerkulbeegga caafimaadka soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Heerkulbeegga caafimaadka la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.